March | 2014 | ဂန္တ၀င် | Page 4
Soft Gate Technology (http://www.softgate-technology.com/)
Soft Gate Technology ဆိုဒ်သည် စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာသတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ပြသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Soft Gate Technology ဆိုဒ်သည် ဝင်ရောက်လေ့လာရန် မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီး အသုံးဝင်သောဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Soft Gate Technology ဆိုဒ်သည် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ၊ စာရင်း အင်း ပညာရှင်များ၊...
News Of Myanmar (http://newsofmm.blogspot.co.uk)
News of Myanmar ဆိုဒ်သည် မြန်မာအွန်လိုင်း ဂျာနယ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ News of Myanmar ရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်မှာ့့ မြန်မာ့သတင်းများ၊ မန္တလေးသတင်းများ၊ မြန်မာ့ ပညာရေးသတင်းများ၊ မြန်မာ့ စီးပွားရေး သတင်းများ၊ နိုင်ငံတကာသတင်းများ၊ မြန်မာ့ အစိုးရ သတင်းများ၊...
Naung Moon (http://www.naungmoon.com/)
Naung Moon ဆိုဒ်သည် မြန်မာစတော့ အိတ်ချိန်းဈေးကွက်၊ မြန်မာ့ ရေနံဈေးကွက်၊ မြန်မာ့ရွှေဈေး စသောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးသတင်းများကို ကို ဖော်ပြပေးနေသော မြန်မာ့အွန်လိုင်း စီးပွားရေးဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Naung Moon ဆိုဒ်ရှိ သတင်းအချက်အလက်များသည် ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးသမားများအတွက် ကြေညာရန်နေရာကောင်း တစ်ခုဖြစ်ကာ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ယုံမျှဖြင့် သတင်းအချက်အလက်အကုန် သိနိုင်သော...
Myanmar Cars DB (http://www.myanmarcarsdb.com/)
Myanmar Cars DB ဆိုဒ်သည် ကားဈေးကွက်အကြောင်းအား အသေးစိတ်စာရင်းပြုစုဖော်ပြပေးသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Myanmar Cars DB ဆိုဒ်တွင် အွန်လိုင်း ကြေညာဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ကားဝယ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်း၊ အေးဂျင့်များ၊ တစ်ဦးချင်းဝယ်လိုသူများ၊ ရောင်းလိုသူများ၊ တင်သွင်းလိုသူများအတွက် ဖော်ပြပေးသောဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ ကားရှိုးရွန်းများ၊ ကားဝယ်ရောင်းသူများ၊ ကားပိုင်ရှင်များမှ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် ဝယ်လိုသူများအားလုံး အဆင်ပြေစေရန်...
မြန်မာတိုင်းမ် Myanmar Times သတင်းဂျာနယ်သည် နိုင်ငံခြားသားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ စပ်တူလုပ်ဆောင်သော သတင်းဂျာနယ်ဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ လက်ထက် အောင်မြင် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် သတင်းဂျာနယ်၊ ပေါ့စာစောင် တစ်ခုကိုသာ ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ Link: http://www.mmtimes.com Myanmar Times News and Journal (also known as...
Democratic Voice of Burma (DVB) – https://www.dvb.no
ဒီဗီဘီ (Democratic Voice of Burma, DVB) သတင်းဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ရုပ်သံ မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အစိုးရ၏ အားနည်းချက်များ လိုအပ်ချက်များကို ရုပ်သံမီဒီယာတစ်ခု အနေဖြင့် စင်တင်ဖော်ပြပေးလျှက် ရှိသည်။ ၄င်းကို ယခင်က နော်ဝေနိုင်ငံက ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခု...
Myanmar Web Designer (MND) (http://www.myanmarwebdesigner.com/)
Myanmar Web Designer ဆိုဒ်သည် ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းများနှင့် ဖွင့်ဖြိုးရေး တည်ဆောက်မှုများအား ဖန်တီးပေးရန် အတွက် လိုအပ်သည်များကို ဖော်ပြနေသော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုဒ်တွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံးပုံစံများ၊ တန်ဖိုးနည်း ပုံစံများနှင့် လိုအပ်သော ပုံစံမျိုးစုံကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်သော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Myanmar Web Designer သည်...
ဧရာဝတီ(Irrawaddy) သတင်းဌာနသည် ချင်းမိုင်အခြေစိုက် သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လို မဂ္ဂဇင်းထုတ်ပြီး မြန်မာသတင်းဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် အင်္ဂလိပ်သတင်းဝဘ်ဆိုဒ် နှစ်ခု ရှိသည်။ လက်ရှိတွင် အပတ်စဉ်ထုတ် ဂျာနယ်တစ်စောင် ထုတ်ဝေနေသည်။ အွန်လိုင်း သတင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ တင်နိုင်သော သတင်းဌာနဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းတွင် အောင်မြင်နေသော သတင်းဌာနတစ်ခုဆို လျှင်လည်း...
Recipes of my Dishes (http://recipesofmydishes.blogspot.com/)
Recipes of my Dishes သည် ကြည့်ရှုသူ ၁ သိန်းကျော် ရှိသော မြန်မာ ဟင်းချက်နည်း အင်တာနက် ဝက်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်းများကို အသေးစိတ်စွာ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ Recipes of my Dishes သည် ကုိုရီယား...
Phoe Thudaw (http://www.phothutaw.com/)
ဖိုးသူတော်သည် (Phoe Thu Taw) သတင်းဦးသတင်းထူးများ၊ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးသတင်းများ၊ လူဖတ်အများဆုံး သတင်းများကို profile တစ်ခုစီပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာ သက်ဆိုင်ရာ updates များကို အမြဲမပြတ် ရေးသားဖော်ပြသွားလေ့ရှိသည်။ Link: http://www.phothutaw.com/ Phoe Thu Taw updates all the latest, hot and...
MyanmarBizPortalဆိုဒ်သည် မြန်မာအွန်လိုင်း စီးပွားရေးဆိုဒ်တစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတကာမှ ပညာရှင်များဖွဲ့စည်း ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ MyanmarBizPortalဆိုဒ်သည် လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာဖြင့် လေ့လာနိုင်သော ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ MyanmarBizPortal ဆိုဒ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်စပြုလာပြီဖြစ်သော သတင်းအချက်လက်ဆိုင်ရာ ဖလှယ်မှုလိုအပ်ချက်များအရ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးနေသော...
Burmese BBC (http://www.bbc.co.uk/burmese/burma)
BBC သတင်းဌာန ကမ္ဘာတွင် အကြီးဆုံး သတင်းဌာနတစ်ခုတွင် အပါဝင်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းများကို မြန်မာဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြရေးသားလျှက် ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ သတင်းများကိုလည်း မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖော်ပြပေးလျှက်ရှိသည်။ BBC Burmese တွင် ရုပ်သံသတင်းဌာနများပါဝင်သည်။ Link: http://www.bbc.co.uk/burmese/burma BBC Burmese section provides world's latest...
မဇျွီမ သတင်း (Mizzima) မီဒီယာသည် အစိုးရ ရုပ်သံ MRTV နှင့် ပူးပေါင်းကာ ရုပ်သံရိုက်ကူးရေး များကို လုပ်ဆောင်နေသည့် အပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်ပျက်နေသော သတင်းများကို ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ၄င်းတွင် သတင်းစာနှင့် ဖုန်းအပလီကေးရှင်း သတင်းများ ရောင်းချလျှက် ရှိသည်။ Link: http://www.mizzima.com Mizzima is...
New World Myanmar (http://newworldmyanmar.blogspot.com/2012/08/b.html)
New World Myanmar ဆိုဒ်သည် စီးပွားရေး၊ ကမ္ဘာ့အရေး၊ ကာတွန်း၊ ကိုယ်တိုင်ရေးစာစုများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ခရီးသွားစာစု၊ ဆောင်းပါး၊ ဆုံးမစာ၊ တရားတော်များ၊ ဓမ္မစာစု၊ ရုပ်ပြ၊ သံစဉ်၊ အတွေး၊ အတွေးကဗျာ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဖတ်စရာ၊ ဘာသာရေး၊ ဘာသာပြန်၊ မှတ်စု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊...
7 Days (http://7daydaily.com/news)
7Days သတင်းဝဘ်ဆိုဒ်သည် ပြည်တွင်းဖြစ်ပျက်နေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး သတင်းများကို ကိုယ်တိုင်သတင်းလိုက်ကာ ဖော်ပြပေးနေသော သတင်းဝဘ်ဆိုဒ် ဖြစ်သည်။ ၄င်းတွင် သတင်းဂျာနယ်၊ သတင်းစာနှင့် မဂ္ဂဇင်းများ ထုတ်ဝေလျှက် ရှိသည်။ Link: http://7daydaily.com7Days Journal updates business news, entertainment, opinions,...
Khine Wing (http://khinewing.blogspot.com/)
Khine Wing ဆိုဒ်သည် မြန်မာအိုင်တီပညာရှင် ကိုခိုင်ထွန်း ဖွင့်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Khine Wing ဆိုဒ်တွင် 3D ဆော့ဝဲများ၊ android battery များ၊ မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာဆော့ဝဲပေါင်းစုံကို စုံလင်စွာ ဖော်ပြထားပါသည်။ Khine Wing ဆိုဒ်တွင် ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အသုံးဝင်ဆော့ဝဲပေါင်းများစွာကိုလည်း စုံလင်စွာ...
Ko Htway (http://kohtway.blogspot.com/)
Ko Htway ဆိုဒ်သည် မြန်မာအိုင်တီ ပညာရှင် ကိုထွေးတင်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Ko Htway ဆိုဒ်တွင် ဝက်ဆိုဒ် နည်းပညာများ၊ ဆော့ဝဲများ၊ ရယ်စရာလေးများ၊ နည်းပညာများ၊ ကျန်းမာရေး၊ သီချင်းများ၊ အထွေထွေ ဗဟုသုတ စသဖြင့် ကဏ္ဍစုံလင်စွာ ဖော်ပြထားသည်။ Ko Htway ...
Yo Yar Lay (http://www.yoyarlay.com)
ရိုးရာလေး (Yo Yar Lay) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်သည် အသုံးပြုသူများ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ၊ ပညာရေး ၊ နိုင်ငံရေး၊ အားကစား ၊ အနုပညာ နှင့် ပါတ်သက်သည့် လတ်တလော ခေတ်စားနေသော သတင်းစုံလင်တို့ကို...
Win Kyi Net (http://www.winkyi.net/2009/12/blog-post_24.html)
Win Kyi Net ဆိုဒ်သည် ဝင်ရန်မြန်ဆန်သည်။ Win Kyi Net ဆိုဒ်တည်ဆောက်ပုံသည် တည်ငြိမ်သောပုံစံကို အခြေခံထားသည်။ Win Kyi Net ဆိုဒ်တွင် ဟာသမျိုးစုံအပြင် အခြားသော ဗဟုသုတရဖွယ် ကဏ္ဍမျိုးစုံကိုလည်း ဖော်ပြထားသည်။ Win Kyi Net ဆိုဒ်တွင်...
Nay Min Maung Maung (http://nayminmaungmaung.blogspot.com/)
Nay Min Maung Maung ဆိုဒ်သည် စိမ်းလန်းမြေ ပရဟိတ အသင်းဝင် မြန်မာအိုင်တီပညာရှင် ကိုနေမင်းမောင်မှ ဖွင့်ထားသော ဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ Nay Min Maung Maung ဆိုဒ်တွင် antivirus ဆော့ဝဲများ၊ android နှင့်ပက်သက်သမျှ ဆော့ဝဲများ၊ ကင်မရာဆော့ဝဲများ၊ ဖိုင်မန်နေဂျာများ၊ အိုင်ဒီအမ်နှင့် ပက်သက်သော...